Amụma kuki ›Blog de Juan Herranz
N'ikwekọ na ntinye nke edemede 22.2 nke Iwu 34/2002, nke July 11, na Services of Information Society and Electronic Commerce, Onye nwe ya na-agwa gị na webụsaịtị a na-eji kuki, yana amụma nchịkọta ya na ọgwụgwọ ha. .
Kuki bụ obere faịlụ dị mfe ezigara yana ibe weebụ a yana ihe nchọgharị gị Kuki bụ faịlụ a na-ebudata na kọmputa gị mgbe ị banyere ụfọdụ ibe weebụ. Kuki na-ekwe ka ibe weebụ, tinyere ihe ndị ọzọ, ịchekwa na weghachite ozi gbasara omume nchọgharị gị na, dabere na ozi ha nwere yana otu i si eji ngwa gị, ha nwere ike iji mata gị.
3. Ụdị kuki ejiri
Saịtị www.juanherranz.com na-eji ụdị kuki ndị a:
Kuki nyocha: Ha bụ ndị ahụ, nke weebụsaịtị ma ọ bụ ndị ọzọ na-emeso nke ọma, na-ekwe ka ọnụọgụ ndị ọrụ gụọ ma si otú a na-eme nha na nyocha nke ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ nke weebụsaịtị ahụ. Maka nke a, a na-enyocha usoro igodo saịtị ị mere na weebụsaịtị a iji melite ya.
Kuki ndị ọzọ: Webụsaịtị a na-eji ọrụ Google Adsense nwere ike ịwụnye kuki na-enye ebumnuche mgbasa ozi.
4. Ebugharị, deactivation na mkpochapụ kuki
Ị nwere ike ịnakwere, gbochie ma ọ bụ hichapụ kuki arụnyere na kọmputa gị site na ịhazi nhọrọ ihe nchọgharị gị. Na njikọ ndị a, ị ga-ahụ ntụziaka iji mee ka ma ọ bụ gbanyụọ kuki na ihe nchọgharị a na-ahụkarị.
5. Ịdọ aka ná ntị gbasara ihichapụ kuki
Ị nwere ike ihichapụ ma gbochie kuki na webụsaịtị a, mana akụkụ nke saịtị ahụ agaghị arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ nwee ike imetụta àgwà ya.
6. Nkọwa kọntaktị
Maka ajụjụ na/ma ọ bụ kwuo gbasara amụma kuki anyị, biko kpọtụrụ anyị: